तरकारीका रूपमा प्रयोग गरिने च्याउ के कसरी खाएमा फाइदा हुन्छ ? सम्पुर्ण जानकारी - ज्ञानविज्ञान
हामीले च्याउलाई अधिकतम तरकारीका रुपमा प्रयोग गरिने गर्छौं । च्याउले हाम्रो खानामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रदान गर्ने गर्दछ । च्याउले हामीलाई खानपानले लाग्ने विभिन्न रोगहरु लाग्न नदिन र हाम्रो शरीरको निराकरणमा मद्दत गर्छ । सबै च्याउ खानयोग्य भने हुँदैनन् ।
कतिपय च्याउमा मानव शरीरलाई हानी पुर्‍याउने विषालु तत्व पनि पाइन्छ । विशेषगरी, जंगली च्याउ खाँदा वा टिप्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । अन्य तरकारीमा जस्तै च्याउमा पाउने एन्टिअक्सिडेन्टले हामीलाई क्यान्सर लाग्न दिँदैन ।
च्याउमा पाइने ‘फोलेट’ नामक भिटामिनले शरीरमा वंशाणु तहमा हुने काममा मद्दत गरी क्यान्सर लाग्ने प्रक्रियामा वाधा पुर्‍याउने गर्छ । च्याउमा प्राकृतिक रुपमै ‘इन्सुलिन’ पाइन्छ । च्याउमा निकै थोरै मात्रामा क्यालोरी र चिल्लो पदार्थ हुन्छ । थोरै क्यालोरी र थोरै चिल्लो पदार्थका साथै प्रसस्त पोषक तत्व पाइने च्याउलाई चिनीरोगीका लागि उपयुक्त हुनुका साथै स्वास्थ्यका हिसाबले निकै उपयुक्त तरकारी मान्न सकिन्छ ।
च्याउमा केही मात्रामा ‘आइरन’ पाइने हुदा यसको सेवनबाट रक्तअल्पता भएका व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ । च्याउमा हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने ‘फाइबर’ प्रसस्त मात्रामा पाइने भएकोले फाइबरले पाचन प्रकियालाई सक्रिय बनाएर हामीलाई भोक कम लगाउने गर्छ ।
च्याउ एक यस्तो अचम्मको वनस्पति हो, जसमा ‘भिटामिन डी’ पनि पाइन्छ, जसकारण शरीरका विभिन्न हड्डीमा भएको समस्यामा फाइदा पुर्‍याउँछ । ‘भिटामिन डी’ले च्याउमै पाइने फस्फोरस र क्याल्सियमको पाचन प्रक्रियामा मद्दत पुर्‍याउँछ । यसै गरि च्याउको सेवनले हाम्रो शरीरमा विभिन्न कारणले लाग्ने रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ ।
च्याउको सेवनल‍े डिप्रेसनबाट बच्न सकिन्छ
बेलायतस्थित इम्पिरियल कलेज अफ लन्डनका अनुसन्धाताद्वारा गरिएको यो अनुसन्धान ‘साइन्टिफिक रिपोर्ट’ मा प्रकाशित छ । सिलोकाइबिन च्याउ उदासी रोग (डिप्रेसन) को उपचारमा धेरै लाभदायक हुन सक्छ ।
अध्ययनअन्तर्गत डिप्रेसनग्रस्त केही बिरामीको उपचार सिलोकाइबिन (एउटा मनोसक्रिय पदार्थ, जुन च्याउमा पाइन्छ) बाट गरे । अनुसन्धानमा ती बिरामी सामेल थिए जसको रोग पारम्पारिक उपचारका माध्यमले निको पार्न सम्भव भएको थिएन ।
Don't Miss it नेवारी खाजा मनपर्छ ? अब यसरी घरमै नेवारी खाजा बनाउनुहोस्
Up Next स्मरण शक्तिमा कमि ल्याउने यि सात काम कहिल्यै नगर्नुहोस – जीवन उपयोगी भनाइहरु